6 nke oge ọkọchị 16 kacha sie ike mere na afọ 10 gara aga | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe na-eme ka okpomọkụ nke mbara ala dịkwuo elu, na-eme ka ọnụọgụ mmiri na ike ya wee sie ike, ya mere, oge ọkọchị na-adabaghị adaba.
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta ala na Mahadum nke Zaragoza abịawo na nkwubi okwu na 6 n'ime oge 16 kachasị akọrọ ọkọchị edere edere na ugwu ugwu nke Iberia Peninsula emeela n’ime afọ iri gara aga. Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu?
1 Oke oge ọkọchị
2 Oké ọkọchị
Oke oge ọkọchị
Dị ka ị nwere ike ịnụworị, oge ọkọchị na Spain na-emewanye oyi ma na-ekpo ọkụ. Nke a na - eme ka emetụta ihe ndị e kere eke na gburugburu ebe obibi. Enweghị mmiri ozuzo na-agbanwe nguzozi nke usoro okike nke na-adabere kpam kpam na mmiri dị ka ntọala nke ọrụ nke ndụ.
Mahadum nke Zaragoza emeela ihe ọmụmụ nke site na uto nke osisi kacha ochie na Spain, ọ gbalịrị ịmegharị ihu igwe nke oge gara aga. Osisi ndị kasị ochie ga-enyocha oge ọkọchị nke afọ 2003, 2005, 2007, 2012 na 2013 n'etiti ndị kacha sie ike edere na oge edepụtara.
Oké ọkọchị na Spain abụghị ihe ọhụrụ. Ihu igwe anyị enweghị oke mmiri ozuzo, agbanyeghị, oke mmiri na-ada kwa afọ na-adịkarị. N'ihi mgbanwe ihu igwe, oké ọkọchị bụ ihe na-arịwanye elu ugboro ugboro na gburugburu Mediterenian, ọ bụ ezie na ọrụ ụmụ mmadụ na usoro okike n'onwe ha emegharịwo n'ọnọdụ a, mmụba ugboro ole ha, ịdị ukwuu na ike ha n'ihi mgbanwe ihu igwe nwere ike ịmetụta nkwado nke dum.
Ya mere, a na-ewere ya na ozi enwetara site na nyocha a ọ dị oke mkpa ịmata mmetụta nke ụkọ mmiri ozuzo n'ọdịnihu ebe isi ogbo nke oke ohia Mediterenian nwere ike ịgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » 6 nke oge ọkọchị 16 kachasị kpọrọ nkụ mere n'ime afọ iri gara aga
ESA ga-azụ na Lanzarote maka ịchịkwa Mars
New York nwere ike ịta ahụhụ idei mmiri kacha njọ n'akụkọ ihe mere eme ma ọ bụrụ na ọ naghị eme ihe iji gbochie okpomoku ụwa